Ahama Steel Bandings-saareyaasha iyo Shirkado cusub | Shiinaha ahama Steel Bandings Factory
Hormo ama xirayaan alaabta iyo accessories lagu soosaaray si wada gunti alaabta, si lifaaq rakiban warshadaha in ay ulaha laga gelin lahaa. Hormo nidaamka waa set oo ah waxyaabaha ugu fiiriyey iyo qalabka qamaar gaar ah bir ama birta sameeyey, daboolay qalabka gaarka ah, gaaska, warshadaha saliida iyo macdanta, calaamadaha qamaar in korontada.
Maaddaama ay faa'iidooyin sida nolosha adeeg kordhiyay; mid aad u fudud oo haboon in la isticmaalo, ammaan iyo si adag u xidh lifaaqaaya, xirayaan accessories lagu saleyn karaa mid aad u ballaaran, in xalka ugu fiiriyey korontada, dhismaha ee khadadka korontada qaybinta: danab hoose iyo danab sare khadadka ABC, khadadka gudbinta dusha, khadadka isgaarsiinta, dhismaha dibadda shabakadaha optic dadban, wadada ama baabuurta calaamooyin iyo kamaradaha video, tuubooyinka iyo qalabka kale ee cadcad, badda iyo gaadiidka tareenka.
Wixii hore, xirmo aasaasi ah oo ku Hormo accessories in fixate ah accessories LV-ABC si cadcad ka mid ah.:
* Ahama birta band
Rakibaadda waa mid aad u fudud
* Iska yaree suunka ahama dherer loo baahan yahay by suunka qalab Code'ka
Ku soo dhawow oo nala soo xiriir in ay faahfaahin dheeraad ah.